Akụkọ - Kedu ihe kacha mma blockchain osooso?
Kedu ihe kacha mma blockchain osooso?
Mining ether (Ether) bụ ụzọ dị mma isi tinye kọmpụta gị ka ọ rụọ ọrụ wee nweta ego.Ego dijitalụ bụ otu n'ime cryptocurrencies kacha mfe m n'ụlọ.Ọ dịkwa obere mgbanwe ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ altcoins ndị ọzọ.Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ike ịnwa ịchọta ego crypto m.Maka Ether nke m, ịchọrọ ngwaike ether na-egwuputa ihe na ngwanrọ dị mkpa.
Iji nweta uru nke m Ether, ị chọrọ ngwaọrụ ngwaike - ndị na-egwuputa ihe.Ị ga-achọkwa kọmputa nke na-arụ ọrụ na ngwaike ahụ na ngwanrọ dabara adaba maka m Ether.Dị ka Bitcoin, Ethereum enweghị ike iji CPU dị mfe gwupụta ya.Miners nwere ike mgbako dị elu, dị mfe ịwụnye, a na-ewerekwa ya dị ka ngwa ngwa ether kacha mma.Nke a bụ Ethereum kacha mmandị na-egwuputa ihe.
Mgbe ihe karịrị afọ 6 nke R & D na-aga n'ihu na ihe ọhụrụ n'ọhịa nke ETH, n'ọhịa nke blockchain, anyị nwere ike ịnye ngwọta dị iche iche tozuru okè.Hongcheng Yujin aghọwo China na-eduga igwe ngwuputa ikpo okwu emeputa n'oge.N'otu oge ahụ, anyị nwere ụlọ ahịa akwụkwọ ikike na Alibaba, nke nwere ike inye gị ọrụ ịkwụ ụgwọ dị mma.Pịa ka ịga Alibaba. Nhazi bụ otu n'ime ọpụrụiche anyị, ma anyị bu n'uche ndị na-arụ ọrụ ụlọ chepụtara ebe a na-egwuputa ihe.Ọ nwere igwe oyibo akpụkọrọ aluminom pin radiato nke omenala maka ike jụrụ oyi na-enweghị atụ.Ọ na-enwekwa obere fan ọsụsọ ma bụrụ otu n'ime ndị na-egwuputa ihe kacha dị jụụ.Ọzọkwa, ọ naghị ewepụta okpomọkụ dị ka ASIC omenala.Ọzọkwa, oghere oghere kaadị ya bụ 70mm, nke dabara na ọtụtụ kaadị eserese na ahịa.
Ugbu a, ọtụtụ narị puku ndị na-egwuputa ihe ruru ijeri dollar na-abanye n'ọkụ ọkụ n'ofe US, na-ebute ụlọ ọrụ ọhụrụ dum - na-ebute ego ụtụ isi ọhụrụ na gọọmentị ime obodo yana nnukwu uru maka ọtụtụ ndị na-egwupụta akụ.Na mgbakwunye, onye na-egwuputa ihe nwere ike ịkwalite ma enwere ike ijikwa ya ọzọ site na nkwalite bọọdụ.Ihe ịrụ ụka adịghị ya na nke a ga-abụ "blockchain accelerator" nke oge a.